Siyaabaha Lagu Daryeelo Indhahaaga Maalin Kasta | Aayaha
Siyaabaha Lagu Daryeelo Indhahaaga Maalin Kasta
Hani OsmanSeptember 23, 2019
Dhibaatooyinka indhaha waala iska ilaalin karaa haddii aad isbarto inaad daryeesho maalin kasta.
Si aad u ilaaliso caafimaadka indhaha iyo aragaada, qaado talooyinkaan hoos ku qoran.
Iska ilaali inaad xoqdo indhahaaga wakhti kasta
Iska ilaali inaad xoqdo indhahaaga ama aad ku taabato gacmahaaga oo aanan nadiif ahayn. Gacmahaaga waxaa ku qarsoon wasakh iyo jeermis sidaa darted markaad ku xoqdo ama ku taabato indhahaaga waxay u gudbinayaan jeermis.
Tani waxay sababi kartaa dhibaato soo gaarta indhahaaga.
Ka ilaali qoraxda
Iska ilaali in indhahaaga ay toos ugu dhacaan iftiinka qoraxda iyo shucaaca UV. Tani waxay sare u qaadaa halista ah in indhahaaga qeybta aragga ay waxyeello soo gaarto ama aad aragga weyso.
Iska ilaali cabista sigaarka
Run ahaantii ma jiraan wax faa’ido ah oo la socda cabista sigaarka. Cabista sigaarka waxay caafimaadka u keentaa dhibaatooyin badan.
Waxaa intaas dheer inuu sababo Kansarka Sambabada iyadoo sidoo kale uu sigaarku keeno cudurka indhaha ku dhaca (macular degeneration) kaasoo sababa arag la’aan iyo cudurro kale oo keena in qofku aragga beelo.
Cabista sigaarka ayaa waxay kaloo dhaawacdaa dareemayaasha indhaha.
Waa lagama maarmaan inaad indhahaaga nasiino siiso kadib saacado badan oo ay macquul tahay inaad shaqeyneysay. Gaar ahaan dadka ku shaqeeya Kumbiyuutarka waa inaad indhihiina ka nasisaan iftiinka Kumbiyuutarka.
Sidoo kale indhaha si joogto ah iskugu qabo ee fur si aad u ilaaliso ukumaha indhaha ugana dhigto kuwo qoyan ama saliideysan taasoo kaa saacideysa inaad heshon arag wanaagsan isla markaana aad ilaaliso indhahaaga.
Si joogto ah u booqo dhaqtarka indhaha
Si lamid ah sida aad jirkaaga mar waliba uga baarto cudurro suurtagal ah, sidaas oo kale u baar indhahaaga.
Booqo dhaqtarka indhaha si uu uga baaro waxyeello ay suurtagal tahay qabaan, arrintaas aad ayay kuu caawineysaa.
Waad ku mahadsantahay akhrinta maqaalkeyga! Waxad qayb libaax ka qaadatay guushayda qoraa ahaan.
Waxyaabaha keeno xanuunka iyo dildillaaca ibta naasaha
Coronavirus oo laga helay xaaska Idris Elba ee Sabrina Dhowre
Idris Elba oo laga helay caabuqa Coronavirus
Sida Looga Hortago Cudurka Halista Ah Ee Coronavirus (Afar Qaab Oo Fudud)
DIGNIIN: Caruurtaada Haku Sameyn Arrintaan Halista Ah, Haddii Kale Xanuunadaan Ayaa Ku Dhici Kara
7 Waxyaabood Oo Muhiim Ah Oo Ay Tahay Inaad Ogaatid Kahor Inta Aadan Guursan
Afar Calaamadood oo Haweeneyda ay lasoo baxdo marka ay ninka nacdo
Clear signs he hates where the relationship is headed
3 tips for revealing your feelings to a man you fancy
Sifooyinka Gabadha Qiimaha Leh Ee Ragga Oo Dhan Ay Raadiyaan